အ ရမ်း ကောင်း တာ ပဲ မ မ ဒါ ရယ် – Grab Love Story
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပြန်တော့ ငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေသတိရမိသည်။ အဲ့တုန်းက သူက ၂၁ ဝန်းကျင်လောက်၊ မိဘတွေပြသနာ ဖြစ်တာကြောင့်ရော မိဘနဲ့အတူမနေရတာကြောင့်ပါ ဆိုးလို့ရမျှ ဆိုးနေတဲ့အချိန်၊ ဆေး၊ အရက် ၊ဆက် အကုန်လုပ်သည်။ အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာ အကောင်ကြီးကြီးသားသမီးတွေပါတယ်ဆိုတော့ လုံခြုံတာလဲပါသည်။ ပေါင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကလဲဒီထဲကလူတွေ၊ ထားတဲ့ဆော်ကအစ။ အဲ့တုန်းက သူတို့ကိုပစ္စည်းပစ်နေတာ ကိုသီဟနှင့် မဒါလီတို့လင်မယား၊ အတွဲကိုယ်စီဖြင့် ဟော်တယ်တကာ သွားဆွဲကြ ပါတီတွေလုပ်ကြဖြစ်သည်။မဒါလီအဖေက မူးယစ်က ဘာကောင်ဆိုလားပဲ သူ့ဆီမှာ မရတဲ့အချိန်မရှိ၊ ထုတ်တဲ့စက်ရုံပိတ်ထားရင်တောင် သူ့အဖေဖမ်းထားတာတွေနဲ့ တစ်နှစ်လောက်ပစ်လို့ရသည်ဆိုပဲ။ ကိုသီဟကတော့ ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်၊ တစ်လတစ်ခါ နှစ်လတစ်ခါလောက်တော့ ဘန်ကောက်၊ စင်ကာပူဈေးထွက်ဝယ်ရသည်။ အခုလိုအွန်လိုင်းကမှာလို့သိပ်အဆင်မပြေသေး။ အလုပ်မရှိ ဖြုန်းအားကောင်းသည့် သူရဇော်တို့အုပ်ဖြင့်တော့ အတော်တွဲမိကြသည်။ သူရကတော့ တစ်ခါမှာလျှင် သူ့ဆော်ဧပရယ်အတွက်ရော နှစ်ယောက်စာ ၁၀၀လောက်မှာရသည်၊ မဒါလီပြောတာတော့ သူမောင်လေးနှင့်တူသည်ဆိုကာ သူရဇော်မှာလျှင် ၁၂၀၊ ၁၃၀လောက် ရသည်။
….“ အား … ဇော် ဆောင့်ဆောင့်” “ ကောင်းလား ဧပရယ် ဟင် ? ” “ကောင်းတယ်မောင် ကောင်းတယ် အဲ့လိုပဲဆောင့် ဧပရယ် ပီးချင်လာပြန်ဘီ”“မောင်က သိပ်အလိုးကောင်းတာပါပဲကွာ ဟုတ်တယ် အဲ့လိုဆောင့် မောင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ်ကွာ . …. . ပီးပီ အချစ်ပီးပီ မောင် အ အား …. ” “မောင်က သိပ်အလိုးကောင်းတာပါပဲကွာ အင့် ဟုတ်တယ် အဲ့လိုဆောင့် မောင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ်ကွာ .၊ ပီးပီ အချစ်ပီးပီ မောင် အ အာ… ” သူရဇော်လဲ သူထိန်းထားသမျှတွေ လွှတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးသူခဏလှဲနေတုန်း သူ့ရင်ဘတ်ထဲဧပရယ်တွန်းဝင်လာကာ မောင် အရမ်းကြာတယ်နော် ဒီတခေါက် ပစ္စည်းကောင်းတယ် အင်း ဒီအတိုင်းလဲမောင်ကြာတာပဲကို ဟုတ်ပါတယ် ကိုကြာကြီးရယ်၊ အသီးလေးဆွဲထားတော့ မပီးနိုင်မစီးနိုင်ဖြစ်သွားတာပြောတာ၊ ပီးတော့ ပိုလဲထန်တယ် နော်၊ မောင်ဟာကြီး သိပ်မကျသေးဘူး ခစ်ခစ် ပြောပြောဆိုဆို လက်သည်းနှင့်သွားထောက်တော့ ဟိုကောင်က ခေါင်းပြန်ထောင်ချင်လာသည်။
သူမကတော့ ခစ်ခစ်နဲ့ ရီပီးကုတင်ပေါ်ကထသွားပြီး စားပွဲမှာထိုင်ရင် ပြောင်းကိုသွားကိုင်နေသည်။ မောင်က လက်နက်ကြီးသုံးတော့ ဧပရယ်လဲ ဆေးစားထားရမယ် ဆိုပီး မီခြစ်ခြစ်ပီး ကောင်းကင်ပေါ် သစ်သီးတက်ခူးနေပြန်ပါသည်။ ပစ္စည်းလေးကောင်းတော့ မမဒါလီတို့အသံတိတ်နေတာပဲနော်မောင် ဟင် ဘာပြောတာလဲ သြော် အရင်ကဆို ကိုသီဟ မြန်တဲ့အကြောင်း ဟာသလုပ်နေလို့ မောင်ရဲ့ ဟား ဟား ဟား ကိုယ့်ဆရာသီဟ ကတပ်ထွက်လား အဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူး မောင်က ပုံမှန်တောင် ၁နာရီ၊ ပစ္စည်းသုံးရင် မိုးအလင်းဆွဲတဲ့ကြောင်းပြောပြတော့ မဒါလီက ကိုသီဟကတော့ သိပ်မကြာကြောင်းပြောပြတာကို ဟာသလုပ်နေကြတာ မဒါလီကတောင် မောင့်ကို ခနငှားနေသေးတယ် ဟား ဟား ဟား လိုက်သွားပါလားမောင် အကိတ်နော် အေး နောက်တစ်ခါတွေ့လိုက်သွားရမယ် ဟား ဟား ဟား မောင် နော် သဲက စတာကို မဒါလီကိတ်သလို သဲက မကိတ်လို့လားမောင်ရဲ့ ပြောပြောဆိုဆို သူ့ဖင်တုံးလေးကို ဘေးတစောင်းလှည့်ပြရင် တုန်အောင်လုပ်ပြပြီး စိန်ခေါ်နေတော့လည်း ဟင်း ဟင်း မယ်မငြင်းလေးကို သူရဇော် ပညာပေးရတော့သည်။
. တနေ့ စီးတီးမတ်မှာဈေးဝယ်နေတုန်း ဟိတ် ဇော် ဧပရယ်မပါဘူးလား ဟာ မမဒါလီ အရမ်းလှနေပါလား မီနီစကပ်လေးနဲ့ မဒါလီကလဲ တစ်တစ်ရစ်ရစ်နဲ့ တကယ်ကိုလှနေပါသည်။ မြှောက်နေပြန်ဘီ ဇော် ရယ်၊ ဘာလဲ ကုန်ခါနီးနေလို့လား ဟား ဟား ဟား အဲ့ဒါလဲပါတာပေါ့ ဧပရယ်က ခေါင်းလျှော်နေလို့ဆိုင်မှာ ကော်ဖီသောက်ဦးလေ မဒါလီ အေး ကောင်းသားပဲ ခုနကမြှောက်ထားတယ်ဆိုတော့ မမတိုက်ပါ့မယ် ဟာ မဟုတ်တာ မမြှောက်ပါဘူး မဒါလီက တကယ်မိုက်တုန်း လှတုန်းကို သူရဇော်ပြောရင်း သူ့ဖင်ကိုကြည့်လိုက်မိတော့ မဒါလီရှက်သလိုဖြစ်သွားသည့်မျက်နှာလေးကို ရင်ခုန်ချင်သလိုလိုပါ။ ကော်ဖီဆိုင်ရောက်တော့ ကိုသီဟရော မဒါ ဒီတခေါက် သြဇီထွက်သွားတယ် ကုန်သည်အသစ်လို့ပြောတာပဲ ဒါနဲ့ ကုန်တော့မလို့ဆို၊ သိပ်မြကြာသေးဘဲနဲ့ ဧပရယ့်အကြောင်း မဒါသိသားနဲ့ မီးခြစ်တောင် အပျောက်မခံဘူး ဟား ဟား ပြောပါ့ ပြောပါ့ မင်းအကြောင်းတွေလဲကြွားပါ့ ကိုကြာကြီးဆိုပဲ စကားပြောရင်း မဒါလီရဲ့အကြည့်တွေက သူရကျော် ခါးအောက်ပိုင်းကိုတချက်ဝှေ့သွားတော့ သူ့လီးမှာဖျင်းခနဲ ခံစားလိုက်ရသေးသည်။
မဒါလီတို့အိမ်ရောက်တော့ ခနခနရောက်ဖူးနေကြအိမ်ဖြစ်သော်လည်း ဒီတခါဝင်ရတာစိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးဖြစ်သည်ဟု ထင်သည်။ ဧည့်ခန်းထဲက သူတို့လင်မယားဓါတ်ပုံကြီးကလဲ လူကိုမျက်နှာပူစေသည်။ ရော့ ဇော် ချီးယား ဘီယာတစ်ဗူးကမ်းပေးရင်း သူကိုတိုင်လဲသောက်သည် ဟား နေပူနေတာ ဘီယာနဲ့မှကွတ်တိပဲ ဟုတ်သည် သူလဲ စိတ်ထဲကမရိုးသားတာနဲ့ ကိုသီဟအပေါ်မျက်နှာပူနေသည်မဟုတ်လား။ ဧပရယ်က ကြာမှာလား ဗျာ အဲ ကြာမယ်ထင်တယ် မဒါ လူလဲစောင့်ရဦးမှာဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲထိုင်စောင့်မနေချင်လို့ထွက်လာတာ ဧပရယ် လူဆိုးမ၊ လှို့ဝှက်ချက်တွေလျှောက်ပြောတယ်၊ မင်းကို ဘာတွေပြောသေးလဲ စကားပြောနေရင်းထွက်သွားတာပါ မဒါပစ္စည်းတွေကောင်းတယ်ပြောရင်းနဲ့ ဟိတ် ဘယ်ပစ္စည်းလဲ ဟားဟားးဟား ကြယ်သီးပါဗျာ၊ မဒါကလဲ ဘယ်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာချည်းပဲကို ဟားဟားဟား ကိုတွေက ပစ္စည်းရှိလူတန်းစားတွေလေ ဟားဟားဟား သူ့နို့နှစ်လုံးကိုပင့်မရင်း ဟာသလုပ်လိုက်ပေမဲ့ သူရကျော်ကိုအခက်တွေ့စေသည်။
မဒါစကားတွေလဲ ကလေးကိုစနေသလိုလို နဲ့ ပိုပွင့်လင်းလာသည်။ ဟုတ်တယ် ဇော် ကိုသီဟ သိပ်မကြာလို့ ဒို့စိတ်ညစ်နေတာကို သူက မင်းဟာကြီး ကြီးရှည်ကြာကြောင်းလာကြွားနေလို့ ခနငှားပါလားလို့နောက်လိုက်တာပါ မင်းမှာဆေးရှိရင် မင်းအကို ကိုပေးလိုက်ပါဦးကွာ ဒီလိုအချိန်မှာကြုံရင်တော့ ပြောရမယ့်စကားတွေအများကြီး အဲ့တုန်းကတော့ ပညာသင်ပဲရှိသေးတယ်မဟုတ်လား ထန်ပဲထန်တက်တယ် ဘယ်လိုပြန်ပြောရမှန်းသူူမသိ အာ မဒါကလဲ ကျွန်တောက် အော်တိုကြာတာပါ ပီးတော့ အသီးလဲဆွဲထားတော့ မနဲရပ်ရတယ် ဧပရယ် ကံကောင်းတာပေါ့ ဒါဆို ဟင်းဟင်း ကိုသီဟကသေးမယ်တော့မထင်ပါဘူး မဒါ မသေးပါဘူး ပုံမှန်ပါပဲ မြန်တာလေးတစ်ခုပဲ မင်းသိတဲ့အတိုင်း သူကအရင်ပီးသွားတော့ မမမှာဆန့်တငန့်ငန့်နဲ့ လက်ပဲအားကိုးရတာပဲ အဲ … ကျွန်တော် ကူ ညီ အဲ ကူညီလို့ရတဲ့ဟာဆိုလဲ ကူညီပါတယ်မဒါရယ် ဟား ဟား ဟား ဇော်ရယ် ကုန်နေပီမို့လား နောက်တဗူးအင်း ကျေးဇူး ထသွားတာကောင်းသည် မဟုတ်ရင် ငဇော်လဲထန်နေရတာနဲ့၊
စဉ်းစားကြည့်လေ သူ ကသူ့ယောကျာၤးမစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းတွေပြောနေတာ၊ ဘီယာလေးသောက်ထားတော့ စကားပြောရတာ အာရွှင်လာသည်။ နောက်တဗူးဖောက်ရင်း စကားစက မထင်မှတ်ဘဲ ဆက် အကြောင်းရောက်သွား၏။ ဖောင်းနေသော သူ့ဘောင်းဘီဂွကြားကိုရောက်ရောက်လာသော မဒါလီ၏မျက်လုံးများကြောင့်သူ ပိုထန်ရသည်၊ မထူးတော့ အနေလဲခက်လှသည်မို့ ခပ်ကျုံကျုံထိုင်နေရာက သူခပ်ရဲရဲပဲဖွင့်ထိုင်ထားတော့ မဒါလီအကြည့်တွေပိုရဲလာသည်။ သူကလဲ ကို့အမကြီး မျက်လုံးနဲ့အရသာခံပါစေ ကိုလဲ သူ့ဖင်တွေ နို့တွေကို လစ်ရင်လစ်သလိုဗူးခဲ့ကြသည်မို့လား။ ကဲ လာဇော် ပစ္စည်းသွားယူရအောင် သူအနည်းငယ်အံ့သြသွားသည်။ဒီအိမ်ရောက်ဖူးသော်လည်း သူတို့လင်မယားခန်းထဲတခါမှှမရောက်ဖူး။ ကိုသီဟလဲ တစ်ခါမှမခေါ်သွားဖူးချေ။သူတို့လင်မယား အိပ်ယာကြီးတွေ့တော့ ငပဲကခံရခက်လောက်အောင်တောင်လာချေပီ။ မဒါကတော့ စကားတွေကောင်းနေတုန်း . . . ဧပရယ်ကတော့ မင်းအကြောင်းပဲကြွားနေတာ သူကအားလုံးထဲမှာစတားဖြစ်နေတာလေ သူကထန်လဲထန်တော့ မင်းကတော့ သိပ်လိုက်ဖက်ပါတယ် ဇော်ရယ် မင်းကလဲ ငထန်ဆိုတော့ ဟုတ်တယ်မလား ခ်ခ် ပြောနေရင်း သူ့အိပ်ယာပေါ်တက် ခေါင်းရင်းထဲလက်လှမ်းနှိုက်နေတော့ သူရဇော်ကို ဖင်ကုန်းပြသလိုဖြစ်သွားပြီး လှစ်ခနဲပေါ်သွားသည့် မဒါ၏ ဝါစိမ့်စိမ့်တင်သားအောက်ပိုင်းနဲ့ အောက်ခံ ခရမ်းရောင်လေးက အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းသွားသည် သူမျက်လုံးမခွါနိုင် အင်း အဲ မမဒါလီ ခုတောင်ကြည့် မင်း မမကိုကြည့်ပီး ထန်နေပီမဟုတ်လား ဟင် ဇော် ဟင်း … ဟုတ်တယ်မဒါလီ မထူးတော့ဘူး ကိုသီဟလဲ စောက်ရမ်းထန်နေလို့ အကြာကြီးမထိန်းနိုင်တာထင်တယ် ရှူး ဧပရယ်ပြောတာတွေတကယ်ဟုတ်မဟုတ်သိချင်တယ်ကွာ. . . ရုတ်တရက်သူ့အနားရောက်လာတဲ့ မဒါလီရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုဖမ်းနမ်းလိုက်တယ်၊
ပြန်နမ်းစုတ်လိုက်တဲ့ မဒါရဲ့အထိအတွေ့ဟာ အရမ်းမိုက်နေတယ်။ နမ်းနေရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုမနာအောင် ကိုက်တာမျိုး။ မဒါရဲ့နို့အုံကြီးကို မရဲတရဲကိုင်လိုက်တော့ နမ်းနေရာကခွါပီး သူ့ညီလေးကို လာစမ်းကြည့်တယ် ပီးတော့ မျက်လုံးလေးပြူးပြရင်း “ အိုးး အကြီးကြိးပါလား ” သွားဖြင့်ကိုက်တဲ့ပုံလုပ်ပြတော့ ပိုမာလာရသည်။ မဒါကိုကုတင်ပေါ်ပွေ့တင်လိုက်ရင်း သူ့အဝတ်တွေကိုချွတ်လိုက်တယ်၊ အောစာအုပ်တွေထဲကလို တတုံးတခဲကြီးမဟုတ်သော်လည်း သူ့အတွက်တော့ အကယ် ပြီးပြည့်စုံတယ် ။ ဘရာကိုချွတ်လိုက်ပီးသူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုစို့ပေးလိုက်တော့ ငြီးလိုက်တဲ့ မဒါအသံကြောင့် နို့မှာ အရမ်း ခံစားမူကောင်း တာပဲ၊ သူ့အကြိုက်ဖြစ်သည်။ နို့စို့နေရင်း မဒါရဲ့ ပေါင်ကြားထဲစမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဖောင်းတင်းနေတဲ့မဒါရဲ့ စပက်ကြီးမှာအရည်တွေရွှဲလို့ ကိုထန်သလို သူလဲထန်နေတာပဲ။
တဆက်တည်း မဒါလဲထန်နေပြီး ဧပရယ်ကိုကြိုရဦးမှာဆိုတော့ သူ ထုတာဘာညာ တွေကိုကျော်ပစ်ရတော့မယ်၊ အား ဇော် ရယ် အရမ်းတက်တာပဲ ဧပရယ်မောင်ပိုင်စီးထားတဲ့ မင်းလီးကြီးကိုလဲပြပါဦး သူရဇော်ကိုတွန်းလှဲ ဘောင်းဘီချွတ်ရင်း အောက်ခံဘောင်းဘီထဲက ကြွားကြွားကြီးထွက်လာတဲ့ လီးကြီးကို အလိုပြည့်သလိုကြည့်ပီး ရွှတ်ခနဲ နမ်းလိုက်သည်။ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဇော်ရယ် အောင်မြင်တဲ့ကောင်ကြီး ပီးတော့ သူ့စူပါ ပါဝါကိုပြပါတော့တယ် လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ပါးစပ်ထဲထည့်စုပ်ပြီး တံတွေးတွေရွဲသွားမှ ပတ်ပတ်လည် သွားနဲ့မနာအောင်လိုက်ကိုက်တယ်၊ သူရဇော်မှာ သူများကိုလူးလိမ့်အောင်လျှာဇောင်းထက်ခဲ့သမျှ သူပြန်လူးလိမ့်နေရတော့တယ်။ ဂွေးဥတွေကိုစုတ်နေတုန်း သူမရတော့ ဒီအတိုင်းဆို မဒါလီမှုတ်နေတာနဲ့ သူပီးသွားနိုင်တယ် သူလိုးချင်သေးသည်။ ခန မဒါ ကျွန်တော်လိုးချင်လာပြီ မျက်လုံးထဲတည့်တည့်ကြည့်ပီးပြောလိုက်တယ်။ မဒါက သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုဆွဲနမ်းရင်း သူ့အပေါ်ကိုတက်ခွလိုက်တယ် ပြီးတော့ အသေအချာတေ့ပီးမှ ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချတယ် တကယ်ကိုဖြေးဖြေးချင်း။
အတွင်းသားနုနုလေးတွေပွတ်တိုက်နေတာကိုတောင်တခုချင်း သိနေရတဲ့ပုံမျိုး သူရဇော်ခံစားလိုက်ရတယ်၊ ဖြေးဖြေးချင်းပြန်ကြွလိုက် ထိုင်ချလိုက်လုပ်နေမှ အဆင်ပြေလာတယ် သိပ်ရှည်တာပဲဇော်ရယ် အင်း အား . . . မမအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ သူနဲ့လျှာချင်းခနနမ်းပြီး လမ်းကြောင်းအဆင်ပြေလာတာနဲ့ မဒါကမြင်းစီးသလိုဆောင့်တော့တယ်။ သူရဇော်ကတော့ သူ့နို့ကြီးတွေကိုထိန်းရင်း မဒါရဲ့ဖင်ကြီးကိုကိုင်ပီး သူနဲ့အဆင်ပြေအောင် အောက်ကပြန်ဆောင့်ပေးနေလိုက်တယ်။ သိပ်မကြာဘူး မဒါဆောင့်ရင်းကနေ လီးတစ်ချောင်းလုံးအဝင် ထိုင်ချပီးပွတ်နေတော့ ခံစားရတာတမျိုးပြောင်းသွားတယ်။ အသံတွေစိတ်လာပီး အား အား ပီးချင်ပီဇော်ရယ် အား အ အ မမပီးပီကွာ အား… သူ့အပေါ်လဲပြိုလာသော မဒါ၏နှုတ်ခမ်းကိုအသင့်ကြိုစောင့်နမ်းရင်း မဒါဖင်ကြီးကိုကိုင်ကာအောက်ကနေ တချက်ချင်းပင့်လိုးလေးလိုးပေးနေလိုက်သည်။ အတော်ကြာမှ မဒါလီက နှုတ်ခမ်းခြင်းခွာကာ သူ့မျက်လုံးတွေထဲထိကြည့်ရင်း သိပ်ချစ်တယ်ဇော်ရယ် ပြွတ် သူရဇော်ပါးထက်အနမ်းချွေ၏ မဒါရဲ့ဆံပင်တွေထဲလက်ထိုးဖွလိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းကိုမြတ်နိုးစွာသူနမ်းပီး ကျွန်တော် မပီးသေးဘူး မဒါ အင်း ပီးအောင်လုပ်ဇော် မမဘယ်လိုနေပေးရမလဲ သူစကားမပြန်အား၊ သူသိပ်ကြိုက်တဲ့ မဒါနို့တွေကိုစို့လိုက်ရင်း မဒါကိုပက်လက်ဆွဲလှန်လိုက်သည်။
ဒါမှသူ့စိတ်တိုင်းကျကြမ်းနိုင်မှာမဟုတ်လား။ ခုနကမကျွတ်သေးသည့်လီးသည် မဒါ၏အရည်တို့ဖြင့်စေကပ်ကပ်ဖြစ်နေသဖြင့် စီးစီးပိုင်ပိုင်လေးရှိနေသည်။ လှေကြီးထိုးပုံစံကိုပဲ ဒူးမှာအားမယူဘဲ ခြေမမှာအားယူပြီး ခါးအားဖြင့် အဆုံးထိဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်ထည့်ပေးလိုက် ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက် တစ်ချက်ခြင်းလိုးသည်။ အချက်တိုင်းမှာ မဒါ၏ကျဉ်းကျပ်သောအတွင်းသားတွေကို သူခံစားရသလိုရှိသည်။ မဒါလဲ ပါးစပ်လေးဟရင်း သူ့ကိုငေးကြည့်နေပုံက ချစ်သူတစ်ယောက်လို၊ သူဆွဲထုတ်လို့အပြင်ရောက်ခါနီး ဒစ်နဲ့မဒါစောက်ခေါင်းအဝ ထိပြီဆိုတာနဲ့ အပြင်ရောက်သွးာမှာစိုးပုံမျိုးနဲ့ သူ့ဖင်ကိုလှမ်းညှစ်ရင်းပြန်ဆွဲထည့်တက်တယ်။ သူထန်ရကျိုးနပ်သည့်မဒါ။ အဝင်အထွက်အဆင်ပြေတာနဲ့ သူအရှိန်ကိုတဖြေးဖြေးတင်ရင်းဆောင့်ပေးတော့ မဒါငြီးသံတွေပြန်ထွက်လာတယ်၊ ဆီးစပ်ခြင်းရိုက်သံတဖတ်ဖတ်နဲ့ မဒါလီရဲ့ငြီးသံအိအိလေးတို့ဟာ နားထဲမှာအသာယာဆုံးလိုပဲ။နဲနဲကြာတော့ ခြေထောက်ညောင်းလာပီး သူရဇော်ပုံစံထပ်ပြောင်းတယ် မဒါလီရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပုခုံးထမ်းပြီး စောင့်ကြောင့်ထိုင်ပီးခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ပေးလိုက်တယ်။ ဖောင်း ဖောင်း အင်း အင်း အ အ ကောင်းလိုက်တာဇော်ရယ် အင်း လုပ်ပါ အဲ့လိုခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးလုပ် ဒါမျိုးစောင့်နေတာကြာပီ ဇော်ရယ် ချစ်လိုက်တာ တအားအားငြီးရင်း မတရား ဆက်ဆီ ကျလွန်းနေသောမဒါနှုတ်ခမ်းကြားထဲသူ့လက်ခလယ်ထိုးထည့်ရင်း ဇော့်ကိုစုပ်ပေးပါဦး မဒါ မဒါလဲလက်ခလယ်ကိုလီးတစ်ချောင်းလိုကို အားရပါးရစုတ်တယ် အောက်ကတဖောင်းဖောင်းဆောင့်နေတဲ့ဖီ်လ်းနဲ့ လက်ခလယ်ကိုစုပ်နေတဲ့အရသာဟာ ကိုယ့်မှာလီးနှစ်ချောင်းရှိနေသလိုကို ခံစားရစေသည်။ ခပ်မြန်မြန်ဆောင့်နေရင်း သူ့လီးမှာနွေးခနဲ့ခံစားလိုက်ရသည်၊ မဒါကိုကြည့်လိုက်တော့ သူ့ဒဏ်ကိုမျက်လုံးလေးစင်းခံစားရင်း တီးတိုးသာငြီးရင်း ရှက်ပြုံးလေးပြုံးရှာသည်။
မမထပ်ပီးသွားပြန်ပီ ဇော် ရယ် . အ . . အ . . မပီးသေးဘူးလားကွာ အင့် အင့် သိပ်အားကြီးတာပဲ အာ့ သူလဲပီးချင်လာပြီ သိပ်အချိန်မဆွဲချင်တော့ ဒါပေမဲ့နောက်ဆိုတာမသေချာသောကြောင့်သာ၊ သူအပီးဆော်တော့မယ်ဆိုတော့ ပုံစံပြောင်းလိုက်သည်။ မိန်းခလေးတွေအသဲစွဲ ခွေးကုန်း၊ မဒါကိုဆွဲထူပြီး ကုန်းခိုင်းလိုက်တော့ မဒါရဲ့ ဒေါကီဟာ သူတွေ့ဖူးသမျှတွင်အလှဆုံးဖြစ်သည်။ ဖင်ကိုအပေါ်ပင့်ကော့ထားပေးတဲ့ ပေါင်ကြားထဲသူဝင်မုဆိုးဒူးထောက်လိုက်တော့ နောက်လှည့်ကြည့်နေတဲ့ မဒါနှုတ်ခမ်းကိုလှမ်းနမ်းပြီး တချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း တုန်တုန်သွားတဲ့မဒါ ဖင်တုန်တွေကို သူအားမလိုအားမရ ဖြန်းခနဲရိုက်လိုက်ရင်း ခါးကိုအနားမပေးပဲအသားကုန်လိုးတော့သည်။မဒါရဲ့အတွင်းသားစုပ်အားကလဲ အသဲစွဲစရာပင်။ အား. . . ရှစ် အား ဇော် အား မမဒါ အရမ်းမိုက်တယ်ကွာ ဇော် ဆောင့် ဆောင့်မမကိုမညှာနဲ့နော် သိလား အား အချက် ၅၀လောက်ကျတော့ သူထိန်းမနေတော့ပဲ အမြန်ဆွဲထုတ်ခါ မဒါရဲ့ဖင်တုန်းလှှလှလေးတွေအပေါ်မှာပီးလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဖက်လျက်သား ကုတင်ပေါ်ကိုလှဲချလိုက်တော့တယ်။ မဒါလီ နားနားကပ်ပီး တိုတိုးလေး အရမ်းကောင်းတာပဲ မမဒါရယ် ပြီးပါပြီ။